Home Wararka Wasiirka A. Dibadda Turkiga oo markii labaad baajiyay safar uu ku imaan...
Wasiirka Arimaha Dibadda ee Turkiga ayaa markii labaad baajiyay safar uu ku imaan lahaa dalka Soomaaliya. Dabayaqadii sanadkii hore ayaa ay ahayd markii uu qorsheystay in uu Soomaaliya tago laakiin waa la baajiyay. Hadana safar labaad oo la qorsheeyay ayaa isna la baajiyay.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq oo ka qaybgalay Barnaamijka One on One ee Teleefishinka TRT ayaa ka hadlay dib u dhac ku yimid safar dhiggiisa Turkiga uu ku tagi lahaa Muqdisho, Doorashooyinka, Xiriirka labada Dalka sida Tababarka Ciidanka, Kaalmada Bani aadamnimada, Maalgelinta, Horumarinta & arrimo kale.
Inkastaa uu Wasiirka ka gaabsan in uu faah-faahin dheeraad ah ka bixiyo sababta keentay dib u dhaca Safarka Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ee Magaalada Muqdisho, balse waxa MOL loo xaqiijiyay in Dowlada Turkiga ayan doonaynin in ay aqoonsi siiso Farmaajo oo waqtigiisa dhamaanada afar bilood ka hor.
Wasiir Cabdirisaaq ayaa qayb ka ah Martida lagu casuumay Shirka Antalya ee Turkiga, waxa uu halkaas kula kulmay xubno u badan Wasiirada Arrimaha Dibadda Dalalka Saaxiibka la ah Xukuumadda Ankara oo ay kawada hadleen xiriirka iyo xaaladda labada Dal.
“Nasiib xumo waxaa baaqday Socdaalka Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga ee Soomaaliya, waxa aad ogtihiin wadashaqeynta naga dhaxeysa, waxa aan kawada hadli doonaa Amniga, Taageerada ciidanka, Bani aadamnimada, Dhaqaalaha, Maalgelinta & arrimo kale” Sidaasi waxaa yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya.